Ciidamo Boolis ah oo la wareegay dhowr goobood | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamo Boolis ah oo la wareegay dhowr goobood
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyay baro koontarool oo ay horay u joogeen ciidanka Asluubta!
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo Boolis ayaa lagu wareejiyay baro koontarool kuwaasoo ay fadhiyeen Ciidamo ka tirsan kuwa Asluubta ee ku yaallay agagaarka Dekeda Muqdisho, Wadada hormarta Maxkamadda Gobolka, Xabsiga Dhexe iyo Kawaanka Malayga.
Ciidankii Asluubta ayaa gebi ahaanba laga qaaday goobihii ay horay u joogeen, kaddib markii ay ku lug yeesheen isku dhacyo dhowr ah oo ay u dambeysay dhacdadii maalin ka hor ka dhacday agagaarka Kawaanka Malayga oo lagu rasaaseeyay kolonyo uu la socday Madaxweynihii hore Xasan Sheekh.
Taliyaha ciidanka asluubta oo kasoo muuqday warbaahinta dowladda labadii maalin ee u dambeysay isagoo ka hadlayay dhacdadii ka dhacday agagaarka maxkamadda gobolka Benaadir ayaa si aada u weeraray madaweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Isagoo markii hore raalli gelin buuxda ka siiyay dhacdadii lagu weeraray madaxweyne Xasan Sheekh ayuu haddana dib uga dalbaday madaxweynaha inuu raalli-gelin ka bixiyo madaxweynaha eedeynii uu u jeediyay ee ahayd in ciidanka Asluubtu weerareen madaxweyne hore!
Tallaabadan ayaa u muuqata mid wax looga qabanayo dhacdadii halkaas ka dhacday, iyadoo taliyaha ciidanka Asluubtana lagu eedeeyay hadalkii dambe ee uu warbaahinta qaranka sheegay, taasoo uu mas'uuliyadda weerarka dusha ka saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.